Chii Chainoita Semalt uye Nei?
Semalt anobatsira sei ne SEO?
Chii chinonzi Website Analytics
Semalt anobatsira sei newebsite analytics?
Semalt inzvimbo yakazara-yakarongedza kushambadzira inopa huwandu hweakakosha ekubatsira mabhizinesi kukura kune huwandu hutsva: AutoSEO, FullSEO, Semalt Web Analytics, Webhu Development, Vhidhiyo Kugadzirwa uye mamwe masevhisi.
Semalt yakavambwa muna 2013 uye ine makore angangoita gumi remakarekodhi ekubatsira mabhizinesi kusvika matsva emagetsi uye huwandu hwekukura kuburikidza nekushandisa -kucheka-mabhaidhi SEO maturusi, analytics uye akajairidzwa matanho ekushambadzira.
Semalt inobatsira mabhizinesi kuti abudirire kuburikidza nekuvandudza yavo SEO nzvimbo, nekuvandudza kwavo kushambadzira mienzaniso kuburikidza nekucheka-kumucheto webhusaiti analytics uye nekupa huwandu hwemamwe mabasa akakosha anodiwa nemabhizinesi mazhinji mukukura kwakadai sekuvandudzwa kwewebhu uye kugadzirwa kwevhidhiyo kusanganisira vhidhiyo yekutsanangura.
Semalt ine basa rekubatsira yega yega yevatengi vayo kuwana hutsva hwebudiriro mazinga nekupa huwandu hwakawanda hwebhajeti-hushamwari SEO uye kushambadzira masevhisi.
Semalt akataura kuti chinangwa chayo ndechokubatsira vatengi vayo kusvika kumusoro kuGoogle uye muhupenyu. Iyo inoyedza kupa vatengi vayo neyevanopindura vatengi sevhisi uye huwandu hwe scalable yekushambadzira masevhisi avanogona kuita pane chero bhajeti.
SEO kana yekutsvagisa injini yekutsvaga inongori nzira yekuwana yakawanda traffic kubva kune yakasikwa yekutsvaga mhinduro yeinjini dzekutsvaga.
Yese yakakura yekutsvaga injini (Google neBing) ine runyorwa rwekutanga ekutsvaga mhinduro inosanganisira mapeji ewebhu uye mamwe marudzi ezvinyorwa semavhidhiyo uye zvemagariro midhiya post.
Yekutsvagisa injini yekutsvaga ndiyo maitiro ekuwana bhizinesi rewebhu uye zviri mukati kuti zviratidze pachena pane izvo zvawanikwa. Icho chiitiko chakawanda-chakarongeka chinosanganisira kusarudzwa kwemazwi, kuvaka dhizaini, pane peji peji optimization uye akati wandei mamwe matanho anoenderera.
Mumufananidzo uri pazasi, SEO inoreva kubatsira webhusaiti yako kuratidzika mune iyo "organic" nzvimbo iyo mawebhusaiti achave akakwira kamwe SEO kuedza kunoitwa apo kuchiratidza munzvimbo "yakabhadharwa" inodhura yega yega webhusaiti mari kuburikidza nekubhadhara-kubaya. (PPC) kushambadzira.
Kubva 2013, Semalt akabatsira ruzhinji rwemabhizinesi nekuvandudza yavo yekutsvaga injini yekushandisa uye ine refu track rekodhi yeibudiriro nyaya dzinobva mukuedza kwavo.
Nhasi Semalt inobatsira mabhizinesi neinjini yekutsvagisa zvakanyanya kuburikidza nemaviri akakosha masevhisi: Auto SEO uye Yakazara SEO, iyo inotsanangurwa pazasi.
Semalt inopawo Yemahara SEO Kukurukura kuti ibatsire mabhizinesi kuona izvo zvavanoda iye zvino uye kusarudza pakati pemapaketi maviri pakati pemamwe masevhisi anopihwa nekambani.
Auto SEO ndiyo yekupinda kwaSemalt iyo SEO sevhisi iyo inopa zvakasiyana siyana SEO yezvinhu pamutengo wakadzika kwazvo wekutanga. Iyo masevhisi anosanganisira: pa-peji optimization, dhizaini yekuvakisa, keyword research, kuvandudzwa kwewebsite uye webhu analytics.
Semalt inopa izvi seyakanaka sarudzo kune mabhizinesi ari kuburuka pasi kana asina chokwadi chekutanga nekutsvaga kwavo injini yekushandisa. Auto SEO inochengetedza chena yekutsvaga injini optimization matekiniki ekubatsira mawebhusaiti kuwana akakwirira maserosi nekukurumidza.
Zvinongoda $ 0.99 kuti utange kutanga nemazuva gumi nematatu ekuyedza Auto SEO, uye kubva ipapo mitengo inonzwisisika kutenderera madhora 99 pamwedzi nemadhureti emwedzi mitatu, mwedzi mitanhatu, uye zvinotengwa pagore.
Nekuti Auto SEO inopa yakaderera yakaderera mutengo, ino sevhisi yave yakakurumbira pakati pemakambani ekutanga uye ayo ari kutsvaga kuwana imwe yekutanga traffic kuburikidza neyekutanga kutsvaga injini optimization kuedza pasina kuzvipira kwakawanda pamwedzi bhajeti inodikanwa nemamwe mauto mazhinji.
Yakazara SEO ndiyo yechipiri yakakwira mwero sarudzo yakapihwa naSemalt iyo inoratidzira huwandu hwemaitiro padanho repamusoro rebasa kupfuura Auto SEO.
Yakazara SEO inopa yakazara yakazara iyo inosanganisira: zvinyorwa zvemukati, optimization yemukati, kukanganisa webhusaiti, kubatanidza mihoro, rutsigiro rutsigiro uye kubvunzana uye chero mabasa ekuwedzera anogona kudikanwa nemutengi.
Semalt Vatengi veSeO yakazara vatengi vanosanganisira makuru e-commerce makambani pamwe chete newemamwe webmasters uye ekutanga mavambi. Sarudzo nhatu dziripo dzeSE Full SEO: yemunharaunda, yenyika yose kana yepasi rose SEO zvichienderana nenzvimbo iyo mutengi anoda kunongedza.
Yakazara SEO sarudzo yakanaka kune mabhizinesi ari kutanga kupinda muchikamu chekukura uye anoda kuona kuti webhusaiti yavo inoenderana neazvino mayero e SEO, kuti chero zvikanganiso zveSEO zvinoderedzwa, uye izvo izvo zvinoda zvinoshanda zvekupfupika uye kwenguva refu SEO mhinduro.
Iyi yepamusoro yepamusoro yebasa inobatsira mabhizinesi kuona kuti ese eSEO mabasa ayo anodikanwa kuti akwire muhomwe uye agare aripo ari kushandirwa pamusoro pemwedzi wega wega: kubva kubatanidza kubatanidza kuvaka kune zvakagadzirwa, webhusaiti kukanganisa kwezvirongwa, pa-peji optimization, uye keyword research.
Mitengo yeOYO yakazara inosiyana zvichienderana nezvinodiwa nemutengi uye chirongwa, uye zvimwe zvakawanda pamusoro pemitengo zvinogona kusimbiswa nekubata mumwe wevamiriri veSemalt.
Chii chinonzi webhusaiti webhusaiti?
Webhusaiti zvewebsite ndiyo dzakasiyana mhando dze data dzakabatwa maererano newebhu: ingave yekunze data maererano neyekutsvaisa chinzvimbo chinzvimbo uye mukwikwidzi chinzvimbo kana zvemukati data zvine chekuita nemigwagwa, shanduko mitengo, bounce mitengo, nezvimwe.
Iyi data inogona kushandiswa kugadzirisa webhusaiti munzira dzakawanda. Ne data iri pamwoyo wekushambadzira kwekushambadzira mashandiro, zvakakosha kuti uvimbe newebsite analytics yekubudirira kwenguva refu newebhusaiti.
Mienzaniso yewebsite analytics inogona kusanganisira zvigaro zvemaitiro akakosha mazwi, akagadzirwa keyword zvinyorwa zvewebsite, pane-peji peji optimization mishumo, rondedzero yemakwikwi emawebhusaiti nemazita avo, mamwe akawanda manhamba.
Semalt inopa pamusoro peiyo mutsara webhu analytics chishandiso icho chinobvumira vashandisi vayo kuita rakasiyana rebasa rebhizinesi ravo. Mazita ehunyanzvi anogona kutariswa nekukurumidza nemudziyo uye kuratidzira kuoneka kwewebsite pane internet.
Kukwikwidza mawebhusaiti kunogona zvakare kuongororwa. Pa-peji optimization zvikanganiso zvinogona kuzivikanwa. Yakadzama dhesi nzvimbo mishumo inogona kudhonzwa chero nguva zvakare.
Webhusaiti yaSemalt analytics chishandiso chinopa vabati vewebhu simba rekutsvaga mikana mitsva yekushambadzira uye kunyatsoona kuti chii chiri kushanda nemabasa avo e SEO uye chii chinogona kuvandudzwa pane.
Semalt's analytics chishandiso chinonyanya kufarirwa uye inopa huwandu hwemamodheru kusanganisira:
Keyword mazano anopa mazano eitsva mazwi makuru ebhizinesi
Mazita emazita ekutsvagisa akakosha mazita pazvinjini zvekutsvaga zuva nezuva
Brand yekutarisisa iyo inoratidza ndeye kukurumbira kwewebsite
Iyo keyword chinzvimbo nhoroondo module iyo inoratidza masitadhi pane nguva
Anokwikwidza muongorori uyo anotendera vashandisi kuti vatsvage mukwikwidzi yavo masiteki uye mazwi akakosha
Uye iyo webhusaiti yekuongorora iyo inoongorora webhusaiti yekutevedzera neSEO maitiro akanaka.
Chikwata chaSemalt chiripo mazuva makumi matatu nemakumi mana neshanu pagore uye makumi maviri nematatu kuti vabatsire vatengi vayo kuti vagadzikane neve Auto kana yakazara maSevhisi eSevhisi kana chero mamwe mabasa anofanirwa kupihwa nekambani.
Semalt inotungamirwa muKyiv, Ukraine asi timu yayo yepasi rese inopa rutsigiro uye kutaurirana kwevatengi mumitauro yakawanda kusanganisira Chirungu, French, Italian, Turkish uye zvimwe.
Kusiyana nemamwe ma-agency anowanzo kushaya timu chaiyo, timu yaSemalt inowanikwa zvakanyanya uye inogona kusangana chero nguva yekudzidza zvakawanda nezve kwavo SEO masevhisi, webhu analytics, webhu kusimudzira, vhidhiyo kusika masevhisi nezvimwe.
Chokwadi chinonakidza: Semalt ane inodakadza peturu turtle inonzi Turbo inoshanda seye mascot yekambani uye inogara muhofisi. Kana iwe ukamboshanyira Semalt muhofisi yavo muKyiv, usakanganwa kumira pedyo uye uti Tende Turbo!
Semalt yakabatsira makambani mazhinji kusvika pamabhizimusi matsva ebudiriro yebhizinesi nekuwana yakawanda mumigwagwa, kuvandudza kushambadzira kwavo zvemukati, kusimudzira analytics yekukura uye nezvimwe.
Nekuda kweizvozvo, kambani ine refu track rekodhi yemazana evatengi vakagutsikana, mazhinji avo akatendeka akavadzokorora vatengi.
Chero ipi yeuchapupu iyi inogona kutaridzwa paKuteedzera Testimonial chikamu chewebsite yeSemalt uye vanosanganisira zvinopfuura makumi matatu emavhidhiyo ufakazi, pamusoro pegumi nemakumi maviri nembiri zvakanyorwa uye 24 zvakadzama kesi zvidzidzo, pamwe nekumwe kuongorora kwakawanda paGoogle ne Facebook.
Semalt yakaburitsa huwandu hwakawanda hwehuwandu hwematsvaga ezvidzidzo pawebhusaiti yake iyo yakaratidza kuwedzera kwemotokari semhedzisiro yekushandiswa kwayo Auto Auto kana Full SEO services. Imwe neimwe yenyaya dzayo yezvidzidzo ine zvimwe zvakawanda zvinogona kuongororwa nekudzvanya pane chero zvinyorwa.
Chero ani zvake anofarira Semalt's SEO kana mamwe masevhisi ekushambadzira anogona kushanyira webhusaiti yavo kuti awone yakazara yakazara yenyaya yezviitiko zvemakesi inoratidza kushanda kwemaitiro akasiyana ekushambadzira ayo kambani inofanirwa kupa.
Kusangana naSemalt kukurukura yayo SEO uye mamwe masevhisi zviri nyore. Iyo webhusaiti iri nyore kufamba-famba kutsvaga sarudzo dzeMahara SEO Kukurukura kana kutanga neyemahara webhusaiti kuita mushumo.
Semalt inopa rutsigiro rwemitauro yakawanda neboka repasi rose iro rinopindura nekukurumidza kubvunza. Kutanga naSemalt inogona kuve nyaya iri nyore yekuwana yemahara webhusaiti kuita mushumo kana kubatana nemumwe wevamiririri vavo kuti vatore mukana wekubvumirana SEO.